Ọ dịghị anya mmiri dịghị anwụrụ ọkụ na-acha ọcha fluted kandụl - China Litbright kandụl (shijiazhuang)
Ikanam kandụl na Remote Yi Dugara kandụl
Ikanam kandụl Nịm na Ivory Design okomoko Collection
Gburugburu udi flameless amụke luster ada
Ivory N'ịga oriọna luminaire votive kandụl set
Multi Harvest mgbụsị akwụkwọ Leaf Ikanam Ogidi kandụl
8 sentimita asatọ iko ite okpukpe kandụl
Festival ji achọ esi ísì ụtọ na acha tealight nwere ike ...
8g-23g Acha tealight kandụl na metal iko
Ọ dịghị anya mmiri dịghị anwụrụ ọkụ na-acha ọcha fluted kandụl
Basic Info Model No .: G65CL-0625D Type: tapered ihe: paraffin Wax ojiji: olili ozu, Holiday, SPA, Religion, Wedding, Party, Birthday, Home Lighting, Ịchọ Mma Function: Lighting agba: White flavor: Unscented Size: 8 * 20cm Burning Time: 8H nhazi: Machinery dayameta; 2.2cm: Ogologo: 22.5cm agbakwunyere Info packaging: shrinked ma ọ bụ akpa nkwakọ Productivity: 36tons Brand: Litbright Transportation: Ocean, Land, Air, TNT dHL gbasie Ebe nke Si Malite: China Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 20'fcl Certifi ...
Ịdị No .: G65CL-0625D
Ihe: paraffin Wax
Ojiji: olili ozu, Holiday, SPA, Religion, Wedding, Party, Birthday, Home Lighting, Ịchọ Mma
N'obosara; 2.2cm: Ogologo: 22.5cm
Packaging: shrinked ma ọ bụ akpa nkwakọ
Transportation: Ocean, Land, Air, TNT DHL gbasie
Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 20'fcl
Akwụkwọ: BSCI BV MSDS
White fluted kandụl, multi-acha fluted kandụl, ọcha taper kandụl, multi-acha taper kandụl. Ihe onwunwe anyị na otu onye bụ 100% paraffin Wax ndị ọzọ bụ 70% paraffin wax na 30% palm mmanụ. Anyị packagings na-polybag nkwakọ, igbe nkwakọ, ịda mbà nkwakọ ngwaahịa na cellophane nkwakọ, anyị nwekwara ike na-mkpo dị ka ndị ahịa 'chọrọ. Anyị na agba na-: ọcha, nwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, acha anụnụ anụnụ ... ọ bụla na agba ị nwere ike họrọ. Anyị ji mara na dripless, Ahịhịa anwụrụ, odorless, elu agbaze mgbe (58 ° C-60 ° C). Ezinụlọ anyị kandụl nwere ọtụtụ dị iche iche grammers na ọtụtụ dị iche iche nha, na grammers si 7g ka 100g, na dayameta si 1.1cm ka 2.5cm. anyị nwere ike na-emepụta ihe grammes, diameters ogologo na ika dị ka ndị ahịa 'chọrọ.
Home Ịchọ Mma
Hebei China (Chile)
Dayameta: 2cm Ogologo: 27.5cm
Litbright kandụl Factory e guzobere nineties narị afọ gara aga. Dị ka a emeputa na factory na Chile China, anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke exporting kandụl. Anyị factory ebe bụ banyere 48.000 square mita na anyị bụ otu n'ime ndị kasị kandụl emepụta na Hebei. Anyị nwere ihe karịrị 800skilled ọrụ na 40 technicians. Anyị mmepụta ikike: 4 × 20 'containers /day.These ihe bụ nke ezi mma na elu aghụghọ, nke na-na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa. Anyị na ngwaahịa na e exported ka America, Europe, Africa na Australia, etc ihe karịrị iri asatọ mba.
Anyị isi ngwaahịa na-agụnye:
ezinụlọ kandụl, ime akara flameless duru oriọna, kandụl na iko ite, na-egbuke egbuke kandụl, tealight kandụl, ogidi kandụl, onyinye kandụl, kandụl, ndị Juu kandụl, bọl kandụl, taper kandụl, votive kandụl.
Anyị ga-anọgide na mgbalị establsih ná mma ahịa dabeere na ezi mma, asọmpi price ma na-echebara ọrụ, na-anabatanụ ileta anyị ụlọ ọrụ ma na kpakorita.
Aha: Fluted kandụl
Arọ: 10,12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80g, 85g, 90g, 95g, 100g, etc
Mbukota: cellophane, plastic akpa, igbe, kraft akwụkwọ
Raw ihe: paraffin Wax, Stearic Acid
High agbaze uche: 58 ° C - 60 ° C
1. Sample E Nwere
2. OEM nabatara
3. Production Arrangment Nye ndị Na Oge
Next: Acha ezinụlọ kandụl na-eme na-enye
40cm White Ogidi kandụl
Birthday White Number kandụl
kandụl Containe r White
kandụl na-ejegharị White
Carrara White marble kandụl ịgụ
Efere kandụl ite White
Dị Iche Iche Size White Ogidi kandụl
Glass kandụl ite White
Dugara taper kandụl White ire ọkụ
Red White Na Blue ogidi kandụl
White Angel kandụl njide
White Efere Angel kandụl njide
White Efere kandụl ịgụ
White Efere House kandụl njide
White Efere painiapulu kandụl njide
White Efere Votive kandụl njide N'ogbe
White Elephant kandụl njide
White Glass kandụl ite
White Glass kandụl ite na mkpuchi
White marble kandụl njide
White poselin kandụl njide
White Soft paraffin kandụl
White Tea Light kandụl Christmas Ụlọ
White Wax kandụl Plain
Ghana ahịa ọcha osisi kandụl
Pure paraffine wax ọcha kandụl
Cotton oriọna na paraffine wax kandụl
ọcha ezinụlọ kandụl
Bougie En France kandụl Hot Ree
Acha na-egbuke egbuke streight kandụl na-enweghị anya mmiri no ...